Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah in 120 million euro ay kula soo wareegto badalka Luka Modrić – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo diyaar u ah in 120 million euro ay kula soo wareegto badalka Luka Modrić
(Real Madrid) 09 Jan 2019. Wargeyska “Don Balón” ee dalka Spain ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez uu isha ku hayo badalka Luka Modrić, kaasoo la filayo in uu Santiago Bernabéu ka dhaqaaqo xili ciyaareedka soo aadan.
Sida ay wararku xaqiijinayaan Florentino Perez ayaa fahansan in xili ciyaareedkan uu yahay kii ugu dambeeyay Luka Modrić uu ku qaadanyo kooxda Real Madrid, xili si xoogan lala xiriirinayo naadiga reer Talyaani ee Inter Milan.
Perez ayaa doonya in 23 jirka kooxda Lazio ee reer Serbia Sergej Milinković-Savić uu ka dhigto badalka Luka Modrić ee kooxda Real Madrid.
Kooxda ka dhisan caasimada Madrid ayay wararku sheegayaan inay diyaarineyso qiimo dhan 120 million euro, si ay kooxda reer Talyaani ee Lazio ay kaga hesho saxiixa da’ayarka reer Serbia ee Sergej Milinković-Savić.
EEG: Sida ay u muuqan karto SHAXDA Chelsea marka uu xirmo suuqa kala iibsiga BISHAN Janaayo....(5-xiddig oo waa Wayn oo ku soo biiri kara Blues)